Fetuses found at Thai Buddhist temple | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Fetuses found at Thai Buddhist temple
Fetuses found at Thai Buddhist temple
Posted by Zaw Wonna on Nov 21, 2010 in News | 11 comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားကျောင်းတစ်ခု အတွင်း ဝှက်ထားသော လူသား သန္ဓေသားအလောင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို ရဲများက တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုသန္ဓေသားများမှာ ကိုယ်ဝန်များကို တရားမဝင် ဖျက်ချပေးသော ဆေးခန်းများမှ လာရောက် စွန့်ပစ်သွားခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ယူဆရသည်။
ပြင်းထန်သော အပုပ်နံ့ကြောင့် ရဲများက ရှာဖွေရာတွင် အင်္ဂါနေ့က သန္ဓေသားအလောင်း ၃၀၀ ကျော် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အလုပ်သမားများသည် သန္ဓေသားအလောင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကို သောကြာနေ့က ထပ်မံ တူးဖော်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုမှုခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူအချို့ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် အလောင်းများကို ဝှက်ပေးသောသူ နှစ်ဦးနှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးသော ဆေးခန်းမှ အလုပ်သမားတစ်ဦးတို့ကို လိုင်စင်မဲ့ ဆေးခန်းဖွင့်မှုနှင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ ပေးမှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ သန္ဓေသား ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနှင့် မတရားပြုကျင့်ခံရခြင်း တို့မှလွဲ၍ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေက ခွင့်မပြုပေ။
Source; BusinessWeek, More fetuses found at Thai Buddhist temple
Thai police have found more than 2,000 fetuses hidden away ataBuddhist temple in Bangkok that were likely smuggled from illegal abortion clinics.
A strong smell first drew police to the temple, where they . . . . . . .
ဘုရားကျောင်းထဲ သွားပစ်ရတယ်လို့.. အလောင်းကလည်း ၂၀၀၀ ကျော်တောင်မှ.. ဘယ်တုန်းတည်းက ဟာတွေလည်း မသိဘူးနော်..
တစ်ကြိမ်ထဲ မဖြစ်လောက်သလို .. တစ်ပတ်အတွင်းလဲ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ..
ဒီလောက် များများရောက်အောင် ဘုရားမှာ ဂေါပကအဖွဲ့ မရှိလို့ မသိတာလား ..
ဖွက်ပေးသူက ဘုရားမှာ တာဝန်ရှိသူလား .. မှီခိုနေသူလား ..
The New York Times မှာက ပိုပြည့်စုံပါတယ်။
မှာ ဖတ်ကြည့် ကြပါကုန်။
ဘုရားကျောင်းကဘယ်သူပါပါ ဖြစ်သွားတဲ့ ၂၀၀၀ ကျော်
အိုး ၂၀၀၀ ကျော်တောင်နော်.. လာပစ်သွားတာလဲ ဘာလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားပစ်တာလဲ တခြားနေရာမရှိဘူးလား။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုန်းကြီးတွေ၊ ဂေါပကတွေ၊ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေက ဘာလို့လက်ခံထားတာလဲ။ မသိတာတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး။ ဒီလောက်ကြီးများနေပြီး အနံတွေ ထွက်နေတာ မသိဘဲ မရှိလောက်ဘူးနော်… သိမှာဘဲ။
မန္တလေးသား နှင့် ဘကြီးအောင် စာတွေ ဘာလို့ တူနေတာလဲ ဟင် ..
အာလာ … တော်တော်ထူးဆန်းတရ် …
တခု စဉ်းစား မိတယ်.. အိမ်မှာ အသားငါးတွေ ချက်စားရင် အပိုအစတွေ ဒီလိုဘဲ ပစ်လိုက်တာဘဲ.. စည်ပင်ကလည်း သိမ်းသွားတာဘဲ.. အမှန်တော့ ခုတ်ထစ်ပြီး ဟင်းသား အပို အစ တွေလို ပစ်ရင် ဘယ်သူက သိမှာလဲနော်.. ဟုတ်တယ်မလား..